हलो जोत्ने सांसद मन्त्री भए भने के गर्लान् ? – newslinesnepal
हलो जोत्ने सांसद मन्त्री भए भने के गर्लान् ?
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७७, आईतवार १२:१४
काठमाडौं । सरकार फेरवदल हुने चर्चा चलिरहेका बेला धेरै सांसदहरु मन्त्रीको लागि ‘लविङ’ गर्न थालेका छन् तर केही सांसदहरु भने पार्टीले चाहेमा मन्त्री भएर जनताको थप सेवा गर्ने भनेर बसेका छन् ।
सम्भवतः असोजको पहिलो सातासम्म केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सक्ने समाचारस्रोतले जनाएको छ तर को पाखा लाग्ने र को चाँहि भित्रिने भन्ने कसैले पनि भन्न सकेका छैनन् । पार्टीका अध्यक्षद्धयको र पहुँचवाला अन्य नेताको दिनरात चाकडी नगर्नेहरु भने योग्य भएर पनि अवसर नपाउने सम्भावना सधैं रहेको छ । तेह्रथुमबाट संविधानसभाको २०७० को र प्रतिनिधिसभाको २०७४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भवानीप्रसाद खापुङ पार्टी र जनतामाझ पनि निकै लोकप्रिय छन् ।
२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार तुलसी सुव्वासँग पराजित भएका उनी निरन्तर रुपमा जनताकै काममा लागे । उनले प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनमा नेकपाको साझा उम्मेदवार भएर नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिता गुरुङलाई २ हजार २१ मतले पराजित गरे । पार्टीकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी उनी निर्वाचनका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री थिइन् । ‘निर्वाचनमा पराजित भएपछि पनि जनतासँगको नियमित भेटघाट र सम्पर्क बढाएँ त्यही फलस्वरुप त्यसपछि मलाई निरन्तर सफलता हात प¥यो’ उनले भने ‘म निर्वाचित भएपछि सधैं जनताको काममा नै लागें, पार्टीका मान्छेले मात्र होइन मलाई सबैले मतदान गरेकाले को मान्छे मेरो पार्टीको हो कि होइन मलाई भोट दियो कि दिएन भनेर खोजी गर्दिन ।’ उनले श्रीलंका, जापानलगायतका देशको भ्रमण गरेर त्यहाँको संसदीय प्रक्रियाका साथै अन्य विषयमा पनि ज्ञान हासिल गरेका छन् ।
उनी प्रतिनिधिसभाको बैठक केही दिनसम्म नचलेको अवस्थामा गाउँ पुगिहाल्छन् । ‘केन्द्रमा बसेर अनावश्यक गफ गर्नुभन्दा पनि दुई चार दिन भएपनि गाउँ पुगेर जनताको दुःख सुख बुझौं भन्ने लाग्छ’ अहिले जिल्लामै रहेका सांसद खापुङले भने ‘ दायाँवायाँ गर्न र जनतालाई ढाँट्न जान्दिन त्यही भएर पनि कहिलेकाँही पछि परें कि जस्तो पनि लाग्छ ।’ उनी २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मोराहाङ गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भनेपछि राजनीतिक उचाई थप बलियो बनाउँदै लगे । स्नातकसम्म अध्ययन गरेका उनले ८ वर्षसम्म विद्यालयमा पढाए । उनी शिक्षकबाट राजीनामा दिएर जनताको सेवामा लागेका हुन् । २०५४ सालदेखि नै नेकपा एमालेको पार्टी प्रमुख भएर जिल्लामा १५ वर्ष अरु पार्टीको पनि मन जितेर काम गरेका उनी सधैं सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्वमा आए । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उनले एमालेका उम्मेदवारलाई जिताए । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्रेरित भएका उनी जनताको काम गर्न पाएकामा खुशी भएको बताउँछन् ।
उनले संसदको आफ्नो ७ वर्षे कार्याकालमा विकासका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । उनी नेकपा एमालेको गत महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए तर थोरैमात्र मतले पराजित भए । ‘मैले जे गरेको छु त्यो अनुभुति जिल्लावासीले गरेका छन्, नभए एकपटक जिल्लामा बुझे हुन्छ’ उनले भने ‘विकट र दुर्गम भएकाले अझै पनि धेरै गर्न बाँकी छ, सबैलाई योजना बनाएर सम्पन्न गर्दै लाने हो ।’ तेह्रथुममा प्रतिनिधिसभाको एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । लकडाउनका बेला घर पुगेका उनले हलो जोतेको तस्विर निकै भाइरल भएको थियो । उनले आफू किसानको छोरो भएकाले हलो जोत्न सधैं मन लाग्ने बताउँछन् ।
खापुङले पहिलेदेखि नै विभिन्न ठाउँमा बसेर जिल्लाका लागि जति गरे त्यसमा आफू सन्तुष्ट भएको बताए । मन्त्री हुँदा भने देशकै लागि केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने उनलाई लागेको छ । ‘नीति निर्माणको तहमा पुगेर त्यहाँ भएको गलत संरचना र विकृतिको विरुद्ध आवाज उठाउन सकियो भने अरु धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन’ उनले आशावादी हुँदै भने ‘धेरै मानिसहरु मन्त्री भएर बद्नाम भएका छन्, जनताभन्दा आफू ठूलो भएको भन्दै धरातल बिर्सने गरेका छन् यो गलत संस्कारको पनि अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।’
नेकपाको सरकार बनेको ३० महिना बितिसकेको छ । जनताका चाहना धेरै भएकाले बेलामौका सरकारमाथि लाग्ने गरेका आरोप पनि उनले राम्ररी बुझेका छन् । ‘नेतृत्व गर्नेलाई कहिलेकाँही आलोचना हुनु अस्वभाविक होइन तर सबै काम सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले जनताले पनि सहयोग र समर्थन गर्नुपर्दछ’ उनले भने ।
देशभर पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोना भाइरसका २ सय ४० जना संक्रमित थपिए